कम्पनी एसईओ सेवाको लागि अनुमान कसरी बनाउने?
चलो सबैभन्दा उचित कम्पनी SEO सेवाहरू खोज्न सुरु गरौं. सामान्यतया, इन्टरनेट मार्केटिङ अभियानको पहिलो क्वार्टरमा महत्त्वपूर्ण भन्दा बढी छ. तपाईं आफ्नो मार्केटिंग बजेट बाहिर वित्त पोषण गर्न कति तयार हुनुहुन्छ? किनकि धेरै डिजिटल एजेन्सीहरू वेबमार्फत उनीहरूको सेवाहरू चढाउँछन् र समयको सार हो. जब तपाईं अझै पनि फोन कलहरू गर्न वा हप्तामा कुराकानीहरू गर्न हप्ता हप्ता (वा पनि महिना) सही निर्णयमा आउँदै हुनुहुन्छ भने, तपाइँका प्रतियोगीहरू अगाडि बढ्न सक्नेछन्, र मा. त्यसोभए, यो राम्रो सम्भव छ कि केहि राम्रो कम्पनी एसईओ सेवाहरु जितनी जल्दी हो सके. तथापि, तिनीहरूको मूल्य पर्याप्त, उचित हुनुपर्छ, प्रारम्भिक स्टार्टअप अवधि को सामान्यतया तंग मार्केटिंग बजेट बर्बाद गर्न को लागी - adjustable airflow atomizer.
अब हामी खोज ईन्जिनियरिङ्को दृष्टिकोणबाट मुद्दा हेर्न प्रयास गरिरहेका छौं, जसले उनीहरूको प्राथमिकताहरू र व्यवहार ढाँचाहरू बुझ्न आवश्यक छ जब उनीहरूलाई उच्च रैंकिंगको वेबसाइटहरू इनाम दिन्छन्।. सर्वप्रथम, चलो आफैलाई केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सोध्ने प्रयास गरौं:
कम्पनी एसईओ सेवाहरूको अपेक्षा के तपाइँ अपेक्षा गर्नुहुन्छ?
के तपाईं सबैको वरिपरि एसईओ को विचार गर्दै हुनुहुन्छ?
सायद तपाइँको मार्केटिंग विभागले यसलाई चलाउन मात्र आग्रह गर्दछ?
या तपाईं यस कुरा मा निश्चित हुनुहुन्छ, तपाईंको वेबसाइट को रैंकिंग बढाने र लंबी अवधि मा अधिक देखि अधिक आय को प्रवाह पहुंचाने को उद्देश्य?
चलो एक साधारण कोणीय ल्याउछ: भर्ती कम्पनी एसईओ सेवाहरू एक किने कार खरीद जस्तो देखिन्छ. हो, गम्भीर रूपमा, तपाईंको छनौट स्वाभाविक रूपमा तपाइँका आवश्यकताहरूमा निर्भर हुनेछ, कुल मूल्य अनुमान संग सम्बन्धित तपाईंको वर्तमान मार्केटिङ बजेटको व्यावहारिकता र किफायतीता संग सम्बन्धित. सर्वोत्तम एसईओ रणनीतिले तपाईंको विश्वव्यापी उद्देश्य र तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूको आवश्यकताहरु लाई अन्वेषण गर्न सुरु गर्दछ. विपरीतबाट सुरु, सस्तो खोजी इन्जिन अनुकूलन सेवाहरू अक्सर सौदा सम्झौता जस्तो देखिन्छ. हो, तपाई केहि नगद बचत गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ. यद्यपि, उनीहरूले तपाईंलाई धेरै लाउने छैनन्.
एकै समयमा, कुनै पनि मानक छैन जब यो कम्पनी एसईओ सेवाहरूको सही प्याकेज चयन गर्न आउनेछ. सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुझाव यो छ कि एसईओ को बारे मा या तो फिक्सिंग को बारे मा या केवल उनलाई आदेश मा ल्याउन छैन. तपाईंको बिक्री र ट्राफिक फिर्ता जीवनलाई ल्याउन एक द्रुत उपचारको रूपमा अवलोकन गर्दै गलत दृष्टिकोण हो. यसो गरेर, तपाईं केवल आफ्नो पैसा बर्बाद गर्न समाप्त हुनेछ. यो चीज हो कि एक प्रभावी एसईओ तपाईंलाई एक उचित ROI प्रदान गर्न को लागी छ: यो बेहतर बेहतर SERP रैंकिंग प्राप्त र अधिक यातायात पंप को बारे मा छैन. वास्तवमा, अन्तिम उद्देश्य ग्राहकहरू तिर्नुको ठूलो प्रवाहमा तपाईंका अझै पनि अवर्गीय ग्राहकहरूलाई रूपान्तरण गर्न चाहानुहुन्छ.
त्यसोभए तपाई कुन तरिकाले व्यवसायलाई उच्च क्षमताको कम्पनी एसईओ सेवासँग सुधार गर्न सक्नुहुनेछ?
सबै भन्दा पहिले, यसले तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण मनसाय, आवश्यकताहरु, र तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूको समस्याहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्नुपर्छ;
तपाईंको व्यापार वेबसाइट को दर्शकहरु द्वारा अपेक्षित सबै भन्दा अधिक सामान्य परिणामहरु को निर्धारण;
तपाईंलाई तपाईंको ल्यान्डिङ पृष्ठ मान पहिचान र सुधार गर्न सहयोग पुर्याउँदछ;
तपाईंको व्यवसायमा समावेश गरिएको उद्योगमा मुनाफाको सबै क्षेत्रहरू हटाउनुहोस्;
प्रत्येक आगन्तुकको प्रयोगकर्ता अनुभव सम्भव छ जुन सम्भवतः व्यक्तिगत रूपमा सम्भव छ, तिनीहरूलाई खरीददारोंमा बदल्न.
यसरी, एसईओ सेवाहरूको लागत तपाईले प्राप्त गर्न चाहने मात्रात्मक नतिजाहरुमा बिल्ट गर्दैछ, उनीहरूको गुणस्तर, साथै स्थायी समय. जाडोमा, सस्तो सौदा हुनु भनेको मामूली प्रगति हो. सम्झनुहोस्, के तपाईं के लागि निवेश गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईं के मूल्य मा छैन. तपाईंको ROI स्वाभाविक रूपमा एसईओ परिभाषित गर्दछ. कुनै पनि संदेह छैन, तपाईले खर्च गरेको विरुद्धमा शुद्ध राजस्वमा 5, 10, वा 20 गुणा वृद्धि गर्नु भनेको एक राम्रो कारण हो: यो तपाईंलाई केहि पनि लागेन!